Sudaan Kibbaa Beelaan Rakkachuun Itti Fufee jira
Adoolessa 11, 2019
Eega walabummaa ishee labsattee waggoota saddeet ka dabarsite - Sudaan Kibbaa keessatti hammeenyi haala qilleensaa, daddaaqaminsi dinagdee fi suuqa adda addaatti wal-waraansi geggeessamu itti fufuun, akka lammiwwan biyyattii gara biyyoota ollaatti baqatu taasise. Kaan immoo, waaltaalee Tokkummaa Mootaa biyyattii keessa jiran deemanii nyaataa fi dahata gafatu.
Sagantaa Nyaata Addunyaa, ka Tokkummaa Mootummootaa – dame Sudaanitti, hoogganaan koomiyunikeeshinii – Toomaas Firii akkana jedhu.
“Addunyaa irratti, Sudaan Kibbaa biyya sagantaaleen Sagantaa Nyaata Addunyaa itti wal-xaxaa fi rakkisaa tahe. Sababaan isaa naannoolee gargaarsi barbaachisu dhibba keessaa harka 60 yeroo roobaa konkolaataan hin galu. Akka foggisoo tahee, kan Sudaan Kibbaa keessatti beelli hammaatu, kan namoonni waan nyaatan dhabanii rakkatan yeroo gannaa ti,” jechuun haala jiru ibsan.
Waraansa bara 2013 dura, haalli Sudaan Kibbaa keessa gaarii akka ture ka dubbattu Meerii Laa, Ijoollee ishee 12 waliin mooraa Tokkummaa Mootummootaa Malakal jiru keessa jiraatti. Walumaa-galatti, waggoota ja’an dabraniif buqqaatota 30,000 tahan tu mooraa sana keessa jiraata. Waraansa bara 2013 tii dura, ishee fi abbaan warraa ishee qonnaa qotatanii, qurxummii baafatanii akka nyaata ofii danda’anii jiraatan dubbatti – Meeriin.
Sudaa Kibbaa, kutaa Centeral Upper Naayilitti, Qindeessaan hojii dirree, ka Humna Tokkummaa Mootummootaa UNMISS – Hazel Diwii, otuu nageenyi hin jiraatiin namoonni qehee ofitti deebi’anii midhaan facaafachuu fi jireenya dhaabhbachuu hin danda’an – jedhu.
Ajjeechaa Baaboo Gambeelitti Raaw’atameef Mootummaan Hidhattoota WBO Himata. Ajajaan WBO, Oromiyaa Lixaammoo Ni Haalan
Hayyu-dureen ABO Manaa Bahuu fi Olseenuu Akka Hin Dandeeye Dhaamsi Dhaqqabe Jedhame
Horroo Guduruu fi Wallagga Bahaa Keessatti Namoonni Hidhannoo Hin Qabne Ajjeesaman, Jedhame
Loltoonni Ertiraa Tigiraay Keessaa Ba'aa Jiru:Itiyoophiyaa
Waa'een Bara Angoo Mootummaa Somaaliyaa Falmii Kaasisee Jira
Afrikaan Talaalii Dhukkuuba Kooviid- 19 Ittisuu Xiqqoo Argataa Jirti.Kanaaf Maal Ta'u Qaba?
Afrikaan Talaalii Dhukkuba Kooviid- 19 Argachuun Duubatti Haftee Jirti: WHO
UNHCR Murtee Keeniyaan buufata baqattootaarratti Kenniterratti Deebii kenne
Keeniayaan Meeshaalee Waraanaa Sasalphaa Omishuu Aansite
Qondaallii Polisii Naayjeeriyaa Angoo Isaanii Irraa Kaafaman